UMeizu uza kuphehlelela i-Android Go kulo nyaka | I-Androidsis
Meizu ukumilisela ifowuni ye-Android Go
UEder Ferreño | | Meizu, Izaziso
IMeizu ineyona mihla inzima. Uphawu lwesiTshayina lubonise nje uluhlu lwalo lweefowuni, nangona sele becinga ngekamva. Kuba ityhilwe nje ukuba inkampani iza kuphehlelela isixhobo nge-Android Go. Iindaba eziphinda ziveze umfutho omkhulu ngeli nyathelo kulo nyaka.
I-Android Go, uninzi lwenu sele niyazi, yinguqulelo ye-Android Oreo yeefowuni ezisezantsi. Inika amava agudileyo kunye neenguqulelo ezilula zezona zicelo ziphambili. Ngoku, ifowuni yeMeizu iya kusebenzisa le nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Kwi-MWC 2018 sinokubona ukuba zingaphi iimveliso ezithiwe thaca izixhobo nge-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Ukongeza, amagama amakhulu anjengeHuawei nawo ajoyine eli nyathelo. Ke kukunyusa kakhulu uluhlu lokufaka. Kwaye ngakumbi nangakumbi iimveliso ziyaxhuma kwi-bandwagon.
UMeizu sele eqinisekisile ukuba ifowuni yakhe iza kufika kwintengiso kwiinyanga ezizayo.. Ke ngekhe ulinde ixesha elide kude kube semthethweni. Kwisixhobo ngokwaso kuye kwaqinisekiswa kuphela ukuba kuya kuba ne-RAM engaphantsi kwe-2 GB. Kananjalo iya kuba neprosesa ethobekileyo. Kodwa akukho kwaziwa ngakumbi ngayo.
I-Android Go iye yaba yenye yezona zinto ziphambili ezisindisa ubomi kwisiphelo esisezantsi. Kuba enkosi kule nguqulo yenkqubo yokusebenza, abasebenzisi banokonwabela imisebenzi kunye namava omsebenzisi amahle. Ke lukhetho olulungileyo kwabo banebhajethi esezantsi xa bethenga ifowuni.
Sinethemba lokuva iinkcukacha ezingakumbi malunga nale fowuni intsha yeMeizu nge-Android Go kungekudala.. Akuzukuthatha thuba lide ukufika, kodwa okwangoku asinalo ulwazi malunga nayo. Kodwa kuyacaca ukuba ii-brand zibheja kakhulu kwesi sicelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Meizu » Meizu ukumilisela ifowuni ye-Android Go
Imifanekiso emitsha ye-Galaxy A6, ngoku ngaphandle kwetyala